Asa sosialin’i Voahangy Rajaonarimampianina : Tohanan’ny mpiara-miombon’antoka matanjaka -
AccueilRaharaham-pirenenaAsa sosialin’i Voahangy Rajaonarimampianina : Tohanan’ny mpiara-miombon’antoka matanjaka
15/03/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Vahoaka sahirana maro no efa nahazo tombontsoa tamin’ny asa sosialin’ny vadin’ny Filoham-pirenena. Tao ireo nila fandidiana haingana, kanefa tsy ampy ny hoenti-manana ka rehefa nitady tolo-tanana tany aminy dia nivoha ny varavarana. Isan’ireny ilay tovovavikely tsy maintsy nodidiana maso. Teo koa ilay rangahy tsy maintsy nodidiana tany ivelany sns…Niompanan’ny asa sosialin’i Voahangy Rajaonarimampianina ihany koa ny lafin’ny fanabeazana an’ireo zanaky ny sahirana (Fanomezana fitaovam-pianarana, trano famakiam-boky toa ny etsy Antanimbarinandriana), ny lafin’ny fahasalamana, sns… Teo koa ny fananganana ivon-toerana maharitra hanofanana an’ireo vehivavy te hihoatra amin’ny fiainany. Etsy Tsimbazaza no misy an’io toerana io. Nanaovan’ny vadin’ny Filoham-pirenena hetsika fitadiavam-bola manokana tao amin’ny Hotel Colbert ihany koa ny fanampiana an’ireo vahoaka sahirana nafindra eny Andranofeno Sud.
Sioka tokana fotsiny, dia nirohotra nanampy ny vadin’ny Filoham-pirenena avokoa ireo mpiara-miombon’antoka maro tamin’io hetsika io. Nahavory petra-bola hoentina manampy an’ireo mponina nafindra eny Andranofeno io tetikasan’ny vadin’ny Filoha io tamin’izany. Tao anatin’izay telo taona nirotsahan’i Voahangy Rajaonarimampianina an-tsehatra tamin’ny asa sosialy ho fanampiana an’ireo vahoaka sahirana eto amin’ny Firenena izay, dia nitombo hatrany ireo mpiara-miasa sy mpiara-miombon’antoka niara-niasa taminy. Isan’izany ny orinasa Dzama, ny Vitafoam, Ny Huawei, Zomatel, Assurance Aro, Tropical Wood, Groupe Ucodis, …Efa mahatratra 30 mahery ireo mpiara-miombon’antoka miara-miasa amin’i Voahangy Rajaonarimampianina.
Mazava araka izany fa dia noho ny fanampian’ireo mpiara-miombon’antoka matanjaka ( jereo lisitra eo ambany) ireo, no ahafahan’ny vadin’ny filoham-pirenena manohy ny asa sosialy izay hataony manerana ny Nosy. Voavaly avy hatrany ny fanaratsiana navoakana gazety vitsivitsy milaza fa tsy mazava ny vola ampiasain’ny vadin’ny Filoham-pirenena. Ireo gazetin’ny mpanohitra ny fitondrana moa no tena manao an’io fanasoketana io. Tsy mahagaga izany satria afangaron’izy ireo amin’ny resaka politika ny asa sosialy fanampiana ny vahoaka malagasy. Na eo aza anefa izany fanaratsiana isan-karazany hataon’ny sasany izany, tsy mampihemotra ny vadin’ny filoham-pirenena amin’ny fanasoavana ny vahoaka malagasy izany. Marobe ireo vahoaka sahirana « tena » mila ny fanampiana avy amin’ny vadin’ny Filoham-pirenena. Ireo mpanakiana sy mpanaratsy ireo tsy mahavita manome na dia « vary iray kapoaka » ho an’ny sahirana aza. Raha hanaratsy dia hainy, kanefa « tany tan-dalàna » isika ary fehezin’ny lalàna vaovaon’ny Serasera io fanalam-baraka olona tsy amin’antony io.